म भष्मासूर हुन्न भन्ने नेता को छ ?
काठमाडौं । यतिबेला केपी ओलीलाई भष्मासुर भन्ने उनका विरोधीहरू एमालेमा छन्, माओवादी केन्द्रमा छन्, जसपामा छन्, दलीय पक्षमा लागेका नागरिक समाजमा पनि छन् । यो देश म सम्भाल्छु भनेर खाका सहित कुन नेता अघि स¥यो र ?
ओलीका जुनसुकै अध्यादेश, निर्णय, नियुक्ती, अपराधीलाई संरक्षण, अख्तियार र न्यायपालिकालाई पक्षीय बनाउने कार्यहरूले उनमा भष्मासुर हावी भएको जो कसैले अनुभव गर्न सक्छन् । ओली आफ्नो निर्णय आफैले उल्लंघन गर्ने र संविधानलाई आफ्नो पक्षमा पारेर दुरूपयोग गर्ने नेता पनि हुन् । ओली अक्षम्य गल्ती गरिरहेका छन् । ओली अन्धो गोलीजस्तै बनेका छन् । उनलाई भष्मासुर भनेर आरोप लगाउनेहरू पनि टेस्टेट भइसकेका भ्रष्टाचारी नै हुन्, जनविरोधी नै हुन् । भष्मासुरको आरोप सत्ताप्राप्तिको झेली खेलमात्र हो ।
फेरि पनि प्रश्न उठ्छ– म भष्मासुर होइन, हुन्न भन्ने नेता को को छन् ? माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव ? अथवा अरू कुन कुन नेता ? सरसर्ती हेर्दा कुनै पनि नेता ओलीभन्दा अनैतिकता, भ्रष्टाचार, अपराधिकरणमा कम्तिका छैनन् । सुध्रने, सुधार्ने कुरा कसले ग¥यो ?